်တော်လှန်ရေး | Kyaw Kyaw Oo's Words of Love and Truth
Browsing All posts tagged under »်တော်လှန်ရေး«
စာမရေးဖြစ်တာအတော်ကြာခဲ့ပြီ။ အခုရက်ပိုင်းအာရပ်နိုင်ငံတွေမှာ တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှူတွေစူနာမီ လှိုင်းတွေလို တလုံးပြီးတလုံး လှိမ့်ပြီးတက်လာတာကို အားလုံးအံ့အားသင့်ပြီးကြည့်နေကြရတယ်။ တူနီးရှား၊အီဂျစ်၊ဂျော်ဒန်၊ယီမင်၊အယ်ဂျီးရီးယား….. အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကအာရပ်ပြည်သူတွေအားလုံးဟာ အာရပ်တွေဟာ အနောက်မှာဝါဒဖြန့်သလို ခပ်တုံးတုံး ခတ်ညံ့ညံ့ လူတွေမဟုတ်ဖူးဆိုတာသက်သေပြတဲ့… သမိုင်းဝင်မဲ့လူထုလှုပ်ရှားအုံကြွမှူတွေလဲဖြစ်တယ်။ အမေရီကန် ၊အစ္စရေးနဲ့အနောက်အုပ်စု အားလုံးအငိုက်မိသွားတဲ့တော်လှန်ရေးကတော့ အီဂျစ်ပြည်သူတွေရဲ့အုံကြွမှူပါဘဲ။ အီဂျစ်ပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှူဟာဒီနိုင်ငံအားလုံးအတွက်အသက်သွေးကြောပါ။ ဒါကြောင့်အီဂျစ်မှာပြည်သူတွေအုံကြွတဲ့ အခါ ဒီမိုကရေစီဘိုးအေနိုင်ငံကြီးများအားလုံး ရဲ့အစိုးရမင်းများဟာ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးရဲတဲ့အထိ လန့်ဖြန့်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်၊ ပြည်သူတွေတောင်းဆိုနေတာ ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးပါ။ ဒီလိုအခြေနေမျိုးတွေမှာဟန်ဆောင်ထားတဲ့မင်းသားမျက်နှာဖုံးတွေကွာကျတဲ့အချိန်ပါ။ အီဂျစ် အာဏာရှင်မူဘာရက်ဟာအမေရီကန်၊ ဂျူးနဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့…. ရုပ်သေးအဖြစ်အသုံးတော်ခံခဲ့တာအနှစ်သုံးဆယ်ရှိပါပြီ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းအာရပ်နိုင်ငံတွေရဲ့အစိုးရအများစု.. ဟာအမေရိကန်နဲ့ဂျူးတို့ရဲ့ထောက်ခံမှူရမှအသက်ရှည်ပါတယ်။ မကြာမတင်က ဝိကီလိခနဲ့ အယ်ဂျာဇီးရာသတင်းဌာနတို့ရဲ့ဖွင့်ချချက်တွေက ဒီအာဏာရှင်တွေရဲ့ မျက်နှာဖုံးကိုခွါချခဲ့ပါတယ်။ အာရပ်ပြည်သူတွေဟာအနောက်နိုင်ငံမှာဝါဒဖြန့်သလိုထုံထိုင်းအသူတွေမဟုတ်ပါ။ အားမတန်လို့မာန်လျှော့နေရတဲ့အဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေပါ။ အခုဒီပြည်သူတွေကအသက်ပေးပြီး အမှန်တရားပါဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုတောင်းနေကြပြီ။ ဒီမိုကရေစီကို မြတ်နိုးပါတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေဘာလို့မသိချင်ဟန်ဆောင်နေကြသလဲ ? ရှင်းပါတယ်။ ငါပြောသလိုလုပ် ငါလုပ်သလိုမလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့ ဝါဒကိုကျင့်သုံးတဲ့ မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွါးကိုသာကြည့်တတ်တဲ့မူဝါဒ.. ဟာကိုလိုနီခေတ် ကမူဝါဒအတိုင်း မပြောင်းမလဲပဲမင်းသားခေါင်းပြောင်းဆောင်းထားတာမို့လို့ပါ။ […]
Blog Stats	158,385 hits
Repentance and asking for forgiveness Astaghfirullah - الحديث القدسي Kyaw Kyaw Oo’s Pages	About Burmese Muslims (Myanmar Muslims)
Top Clicksdailymail.co.uk/news/arti…navedz.wordpress.com/2010… Myanmar ataGlance	Total Population 56.5 million
Big Picture Photoblog ( Bostonglobe)The world mourns Mandela December 6, 2013South African leader and anit-aparthied hero Nelson Mandela died December5at the age of 95. Mandela was imprisoned for 27 years for fighting against apartheid and upon his release in 1990, continued to strive for peace and reconciliation as president of ANC and South African president in 1994. The country and the world mourns his death and celebrates his l […]Daily Life: November 2013 December 4, 2013For this edition of our look at daily life we share images from Spain, Nepal, Afghanistan, Russia, Cambodia, Indonesia, and other countries around the world. -- Lloyd Young ( 26 photos total )A performer on the Cirque du Soleil float cheers after firing confetti into the crowd on Sixth Avenue during the 87th Macy's Thanksgiving Day Parade on Nov. 28 in […]Two communities fight for food on the Kenyan and Ethiopian border December 2, 2013The Turkana are traditionally nomadic pastoralists, but the pastures needed to feed their herds suffer from recurring droughts and many have turned to fishing. The trend began back in the 1960s, followingadevastating drought, which wiped out entire herds. The government introduced communities to fishing in the mostly untouched Lake Turkana. But now the lak […]2013 National Geographic Photo Contest November 30, 2013The National Geographic Photo Contest for 2013 finished collecting entries on Nov. 30. This post featuresasampling of ones we thought were great. Winners in the three categories (people, nature, places) will be published in the National Geographic magazine. The caption information is provided and written by the individual photographer. ( 23 photos total)(N […]Photographing an African safari November 27, 2013Boston Globe Staff photographer Essdras M Suarez experiencedatwo week safari in Kenya and Tanzania this year. Here isaselection of what he captured and thoughts upon his return: Asaphotojournalist, youre always looking to capture moments that define life. In the wild, youre witnessing life or death situations, and itsatruly humbling experience. We […]Charles Dharapak: Instagrams from Washington, D.C. November 25, 2013I am drawn to photographs of things that are not inherently visual. It's not easy to make interesting photographs of people at press conferences. These photographs are from the Instagram feed of Charles Dharapak,astaff photojournalist for the Associated Press, currently based in Washington, D.C. Good photographers notice things that others don't. […]50th anniversary of the JFK assassination November 22, 2013Fifty years ago, President John F. Kennedy was assassinated in Dallas. As the shocked nation grieved for the popular president, more inconceivable events followed. Within hours,anew president was sworn in and within days the shooter was caught and then killed byalocal businessman on live TV. Nov. 22 is filled with events to mark this dark day in American […]Overnight in an East German Bunker November 20, 2013Reuters photographer Ina Fassbender spentaday atamuseum which isaformer East German bunker, built in the 1970s to shelter the district's command unit in an emergency. The 3,600-square-meter bunker now offers visitors the chance to stay there overnight as part ofahistorical "reality experience". Depending on the size of their group, gue […]Tornadoes and severe weather slam the midwest November 18, 2013A powerful late-season wave of tornadoes, thunderstorms and damaging winds hit 12 states on Sunday. News organizations reported anywhere from dozens (The Washington Post) to over 81 (The Chicago Tribune) tornadoes that touched down in the midwest, killing at least eight people. Looking at these photographs, its hard to imagine that so many people walked away […]Winter Olympics 2014: Carrying the flame November 15, 2013Earlier last month in Greece, the Olympic flame began its ceremonial journey to the site of the Winter Games in Sochi, Russia. The flame is being carried across all 83 regions of Russia via relay by torchbearers. The flame has already visited the North Pole and International Space Station as it travels to the opening ceremonies on Feb. 7. -- Lloyd Young ( 31 […]Big Pictures